किन लेखिन् प्रधानमन्त्रीकी नीजि चिकित्सक डा. सिंहले ‘हामी सबैले प्रधानमन्त्रीको पूर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना गरौं’
हाम्राेखबर बिहीबार, भाद्र ५ २०७६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि थप उपचारका लागि विहिबार पुनः सिंगापुर तर्फ लागेका छन । केही दिनअघि सिंगापुरमा आफ्नो नियमित स्वास्थ्य उपचार गरेर फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार नदेखिएपछि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनी पुनः उपचारका लागि सिंगापुर तर्फ लागेका हुन ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई लिएर बिभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओली थप उपचारका लागि सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटल दोहोर्याएर गएका हुन । यसअघि उनी गत साउन १९ गते नियमित स्वास्थ्य उपचार गराइ २७ साउनमा फर्किएका थिए । फेरि भदौ ५ मा थप उपचारका लागि उनी सोही हस्पिटल प्रस्थान गरेका छन ।
मुलुककै प्रधानमन्त्री अस्वस्थ्य हुँदा नागरिकमा चासो हुनु अस्वभाविक होइन । तर यो चासोलाई सरकार वा प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि गम्भीर रुपले लिएको देखिदैन । आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता हुन वा शुभचिन्तक उनीहरु समेतलाई प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे जानकारी छैन भने अन्य आमनागरिक बेखबर हुनु त स्वभाविक हो ।
उपचारपछि साउन २७ मा फर्किएका प्रधानमन्त्रीलाई यो बीचमा के भएको हो ? दोहोर्याएर किन उनी थप उपचारमा जान लागेका हुन ? यो ठीक हुने हो कि होइन ? अब के हाला ? यी यस्ता जिज्ञासाहरु यतिबेला छरपष्ट भएका छन । अझ त्यसमा पनि साउन २७ मा स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्रीले केही नबोल्नु, न त उनका सहयोगी, सल्लाहकार अनि सरकारले नै केही भन्नु । यी कारणले पनि धेरै अनुमान र आशंकाका कुराहरु उब्जेका हुन ।
प्रधानमन्त्रीले ट्वीट गर्दै आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो रहेको जनाए पनि त्यसलगत्तै उनी विरामी भए । उनैका कारण पार्टीको सचिवालय बैठक पनि पटक पटक सारिदै लगियो । यही बीच प्रधानमन्त्री प्रकट भए ‘हिजो मलाई ज्वरो आएको थियो, सिटामोल खाइदिएको आज चट भयो’ हल्का टिप्पणी गर्दै । उनले आफू सामान्य बिमारी पर्दाे मान्छेहरुले विभिन्न कुरा काट्न भ्याएको पनि बताए । उनले आफू १२ बर्षअघि बिरामी भएको र अझै १५ बर्षसम्म बिरामी नहुँने भन्न समेत भ्याए ।
एकाएक प्रधानमन्त्री दोहोर्यार उपचारका लागि जानु भनेको गम्भिर विषय हो । जसलाई हाँसो वा उखान टुक्कामा उडाउँन सकिदैन । त्यसमाथि उनको स्वास्थ्यकाबारेमा अहिलेसम्म जानकारी नगराउनुले अनेकौं अनुमान निम्त्याएको छ, जुन स्वभाविक छन ।
निसन्देह नै प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य संम्वेदनशील छ । केही वर्ष अघि उनको भारत नयाँदिल्लीस्थित एक अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । अहिले मृर्गौलाले काम गर्ने क्रम घट्दै गएपछि उनी अस्वस्थ्य भएका हुन । यसबारे प्राय सबै जानकार छन । प्रधानमन्त्रीका उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले दिएको जानकारी अनुसार उनको मिर्गौलामा ‘क्रेटिनिन’को मात्रा बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य मानिसमा ‘क्रिटिनिम’को मात्रा १ दशमलव ४ हुन्छ । त्यो दर प्रधानमन्त्रीको बढेर गएको उनी बताउँछन । तर यस विषयमा कसैले खुलेर बोल्दैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक चासोको विषय हो । त्यसैले पनि दबाब भएर बिहिबार प्रधानमन्त्री सिंगापुर उडनुअघि उनकी नीजि सहायक डा.दिब्यासिंहले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सामान्य जानकारी गराएकी छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीमा मृगौलासम्बन्धि एण्टीबडीको मात्रा धेरै देखिन गएको छ । तर यो एण्टीबडी के हो ? त्यो बढी भएमा के हुन्छ ? यसले केमा असर गर्छ ? यी लगायतका केही खुलाइएको छैन । एण्टीबडीलाई शरिरबाट निस्कासन गरी निराकरण गर्ने उपचार विधिलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री फेरि सोही हस्पिटलमा जान लागेको डा. सिंहले उल्लेख गरेकी छन ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यकाबारे डा. सिंहले दिएको जानकारी बाहेक यतिबेला नागरिकलाई विश्वास गर्ने अर्को विकल्प छैन । तर उनले सँगसँगै लेखेको ‘हामी सबैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गरौं’ भन्ने बाक्यले चाहिं उत्तिकै झस्काएको छ । हामी पनि कामना गरौं, जसरी उपचारका लागि मुस्कुराएर प्रधानमन्त्री सिंगापुर तर्फ लागेका छन, स्वदेश फर्कदा पनि त्यही मुस्कुराहट देख्न पाइयोस् ।
गोपाल पौडेल ३ दिन अगाडी
गोपाल पौड्याल ४ दिन अगाडी
शेरबहादुर सिंह १० दिन अगाडी